Maxaad ka taqaan Waxtarka Liin Dhanaanta (Maqaal) – Somali Mail
Home Health Maxaad ka taqaan Waxtarka Liin Dhanaanta (Maqaal)
Geed Miroodyada la manaafacaadsado waxaa ka mid ah liin dhanaanta oo waxtar weyn u leh Dadka, marka waa maxay Liin dhanaantu?, Liin dhaanaantu waa miro ka mid ah khudaarta oo ka tirsan qoyska liinta. Liin dhanaantu waxay caan ku tahay dhadhankeeda dhanaanka ah iyo biyaha asiidh badan ee laga helo miraheeda. Geedka liin dhanaantu waa mid waligiis cagaar ah oo ka dherer gaaban geedaha kale ee liinta.
Marka aan ka hadalno Faa’idooyinka laga helo isticmaalka liin dhananta.liin dhanaantu waxay yaraysaa ama hoos u dhigtaa acidka jidhka,Liin dhanaantu waxay caawisaa shaqada beerka, waxayna dhalaalisaa waxyaabaha halista ku ah, sida aashitada uriik “Uric Acid”, waxay kaloo dishaa dacarta, sidaas daraadeed waxaa lagu taliyaa in qofka uu subaxii hore cabo biyo liin dhanaan oo qandac ah si beerka u nadiifismo.
Liin dhanaantu waxay nadiifisaa mindhicirrada, waxay kordhisaa dubaaxinta mindhicirrada si ay jirka uga saaraan waxa mindhicirrada ku dhex jiro, waxay kaloo la dagallantaa gooryaannada caloosha ku jiro sida tuunta oo kale,Liin dhanaantu waxaa aad ugu badan fitamiin C-ga, fitamiinkaan oo xoojiyo difaaca jirka lana dagaallamo infekshanka ama Caabuqa ay feyrasyadu keenaan sida Hergabka iyo wixii soo raaca.
Haddaan ka eegno dhinaca Is qurxinta, liin dhanaantu waxay qurxisaa wajiga, waana jeermis dile awood buuxa leh, waxay la dagaallantaa caabuqa, bakteeriyada iyo fayrasyada qaar oo ay ku samayso waxa loo yaqaano “inactivation”.
Liin dhanaanta waxay xoojisaa xididada, waxayna yareysaa halista inay xididada dillaacaan ama qofka dhiigbax jirka gudihiisa ku dhaco, khaasatan dadka qabo dhiig-karka.
Liin dhanaanta waxaa ku jiro aashitada loo yaqaano “Citric acid” tan oo jirka ku caawiso inay misho ama dhalaaliso dhagaxaanta ku samaysmo xameetida iyo kilyaha, dadka ay ku soo laalaabtaan dhagaxaanta kilyaha iyo xameetida waxaa lagu booriyaa inay cabista liin dhanaanta joogteeyaan.
Previous article Muddo kadib Malala YousufZai oo ku laabatay Pakistaan
Next article Guddiga Aqalka Sare ee loo xilsaaray Xalinta khilaafadka oo si cad u sheegay inuu burburay waan waanti ay wadeen warbixin